China Fiber Laser ဂဟေဆော်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက်
XTLASER သည်ပြီးခဲ့သည့် ၁၇ နှစ်အတွင်း Fiber လေဆာရောင်ခြည်ပြုခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းနည်းပညာကိုအထူးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်၊ ဖိုင်ဘာလေဆာအမှတ်အသားစက်၊ ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက်၊ လေဆာထုစက်၊ XTLASER တွင်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ရှိပြီးအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ၀ န်ထမ်းများသည် ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်သည်နည်းပညာတိုးတက်မှု၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားများကို။
ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေစက်စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာ, ချောမွေ့ဂဟေကူးပြောင်းခြင်း, ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဂဟေ, အဘယ်သူမျှမငါးစကေး; ဂဟေဆော်ခြင်းကြောင့်အပူလျော့နည်းခြင်း၊ အဝါရောင်သေးခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း၏နှစ်ဖက်စလုံးမှအနက်ရောင်areaရိယာများ၊ ချောချောမွေ့မွေ့ဂဟေဆော်သောမျက်နှာပြင်, ထပ်မံပိုလန်ရန်လိုအပ်သည်, အလုပ်သမားနှင့်အချိန်ကုန်ကျ။
လေဆာ၊ ရေတိုင်ကီနှင့်ထိန်းချုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုသေးငယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလုပ်ခွင်အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ပါ။ ရွေ့လျားနေသော casters များသည်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းအလုပ်ခွင်တွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လက်ကိုင်ဂဟေဆက်စက်တွင် 5m, 8m သို့မဟုတ် 10m optical fiber ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည် workbench ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြတ်သန်းသည်။
(3) အသုံးပြုမှုနိမ့်ခြင်းနှင့် upkeep ကုန်ကျစရိတ်
စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာရောင်ခြည်၏ photoelectric converting Rate သည် ၃၀% အထက်တွင်ရှိပြီး၎င်းသည် YAG လေဆာ (၃%) ၏ ၁၀ ဆနှင့်၎င်း၏စွမ်းအင်တည်ငြိမ်မှုသည်± 0.5%; ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နိုင်သောအခေါင်းပေါက်တွင်မည်သည့် optical မှန်ဘီလူးမျှမရှိပါ။ စုပ်စက်အရင်းအမြစ်သည်နာရီ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကြာရှည်ခံနိုင်သည်၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၌ဂဟေဆော်သည့်ဝါယာကြိုးကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များမရှိပါ။
စက်များအားလုံးသည် European Union CE authentication ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး F အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ISO 9001.XTLASER နည်းပညာကိုဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား၊ မလေးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ 1000w / 2000w ကက်ဘိနက်မီးဖိုချောင်၊ လှေခါး၊ ဓာတ်လှေကား၊ မီးဖို၊ သံမဏိတံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်အမိုး၊ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောလေဆာဂဟေစက်နှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောလေဆာဂဟေစက်။
* 1000w လက်ကိုင်ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက်ကိုကြော်ငြာခြင်း၊ ကိုယ်ထည်သိုလှောင်ခန်း၊ အလင်းရောင်၊ သတ္တုပရိဘောဂ၊ နိုင်ငံခြားသတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
လက်ကိုင်လေဆာဂဟေဆော်ရန်ကိုကျယ်ပြန့်စွာကြော်ငြာခြင်း၊ ကိုယ်ထည်သိုလှောင်ခန်း၊ အလင်းရောင်၊ သတ္တုပရိဘောဂ၊
XTLASER သည်ကျော်ကြားသော ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖန်စီဒီဇိုင်းများရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ဖိုင်ဘာလေဆာဂဟေဆော်စက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!